အိမ္မွာ အသက္ (၆၀) ေက်ာ္ လူႀကီးမိဘေတြ ရွိရင္ ဒီPOST ေလးကို ဖတ္ေပးပါ – Alanzayar
အိမ္မွာ အသက္ (၆၀) ေက်ာ္ လူႀကီးမိဘေတြ ရွိရင္ ဒီPOST ေလးကို ဖတ္ေပးပါ
စာနာ နားလည္ေပးပါ အသက္ ၆၀ ေက်ာ္လာတဲ့အခါလူႀကီးေတြ ဦးေႏွာက္က စက်ဳံ႔လာၿပီလို႔သိပၸံပညာရွင္ေတြက သုံးသပ္ၾကတယ္.. အသက္ ၆၀ေက်ာ္မိဘေတြ ႐ြိလာတဲ့အခါက္မ တို႔ အမ်ားႀကီးနားလည္ေပးရမယ္စိတ္ရွည္ေပးရမယ္.
လိုအပ္သမွ်လည္း တတ္ႏိုင္သေလာက္ ကူညီေပးရပါမယ္။အာ႐ုံေၾကာ အားလုံးက်ဳံ႔လာတဲ့အခါထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းေတြနည္းလာၿပီ စကားျပစိ ျပစိ ေျပာလာၾကမယ္ကိုယ့္ မသန္စြမ္းဘူးထင္မွာစိုးလို႔အိမ္ရွိသမွ်အလုပ္ လိုက္လုပ္လိမ့္မယ္။
လိုအပ္သမွ်လည္း တတ္ႏိုင္သေလာက္ ကူညီေပးရပါမယ္။အဲ့ခါ ေနာက္ကျပန္လိုက္လုပ္တဲ့ သားသမီးေတြက ျငဴစူလာတဲ့အခါ မိေဘၾတစိတၠ ကေလးလိုျပန္ျဖစ္လာပြီး ဝမ္းနည္းလာမယ္။
အထီးက်န္လာမယ္ မေျပာရဲမဆိုရဲ ျဖစ္လာၾကတယ္ တစ္ကယ္ေတာ့ အဲ့ခ်ိန္လူႀကီးကိုလည္း ေလးစားၿပီးကေလးလို သေဘာထားေပးရမွာပါလိုအပ္သမွ်လည္း တတ္ႏိုင္သေလာက္ ကူညီေပးရပါမယ္။တစၡဳခု ဝယ္ေပးတဲ့ အခါတိုင္းအေဖ တို႔ ေအမ တို႔မွာရွိတယ္မလိုဘူးအၿမဲ ျငင္းတတ္လာမယ္ဒါ ဟာ အပို မကုန္ေစခ်င္လို႔ပါ
တစ္ကယ္ေတာ့ ေက်နပ္ ဝမ္းသာေနတာ..အသက္ႀကီးၿပီ ဘုရားတရားပဲ လုပ္ပါလားလို႔ တိုက္တြန္းလို႔မရပါဘူးလိုအပ္သမွ်လည္းတတ္ႏိုင္သေလာက္ ကူညီေပးရပါမယ္။
အသက္ႀကီးလာေလ ကေလးစိတ္ျပန္ျဖစ္လာတာမို႔အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို ၾကာၾကာစိတ္ဝင္စားတာမ်ိဳးမရွိေတာ့ပါဘူး က်မတို႔ လူႀကီးမိဘေတြကို စကားေျပာေပးရမယ္။စားခ်င္တာဝယ္ေကြၽးရမယ္သူတို႔ လုပ္ခ်င္တဲ့ အိမ္မႈကိစၥမေသသပ္ေသာ္လည္းေပးလုပ္ရမွာပါ။
လိုအပ္သမွ်လည္း တတ္ႏိုင္သေလာက္ ကူညီေပးရပါမယ္။အသစ္အသစ္ေတြ ဝယ္ေပးေသာ္လည္းအေဟာင္းကို မစြန႔္ပဲ သိမ္းထားတတ္ၾကတာလည္းအသက္ႀကီးသူေတြက ကေလးလိုမို႔ႏွေမ်ာလာၿပီး မစြန႔္ႏိုင္ၾကတာပါ အသက္ႀကီးလာတဲ့အခါ.
တစ်ချို့ သော မိဘေတြဆိုသားသမီးက အေဝးကေန လိုလေသေးမရှိ ပို့ပေးကြပေမယ့်သူတို့လိုချင်တာက အဲ့ဒါမဟုတ်ပါဘူးလိုအပ်သမျှလည်း တတ်နိုင်သလောက် ကူညီပေးရပါမယ်။
နွေးထွေးမှု အလေးထားမှုစကားပြောပေးတာမျိုး လိုချင်ကြတာပါကျမ ကေတာ့ မူကြိုလည်းသင်မူလတန်းပြ ဆရာမလည်းဖြစ်ကလေးတွေနဲ့ အနေကြာလာတော ကေလးစိတ္ကို ဖတ်ရင်း သူတို့လေးတွေ
ေျပာသမွ် တိုင္သမွ်ကို နားေထာင္ေျဖရွင္း ေပးတတ္သူတစ္ေယာက္မို႔ လူႀကီးမိဘေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားစိတ္ကိုလည္းေလ့လာၿပီး နားလည္ေပးရပါမယ္လိုအပ္သမွ်လည္း တတ္ႏိုင္သေလာက္ ကူညီေပးရပါမယ္။Credit..
အိမ်မှာ အသက် (၆၀) ကျော် လူကြီးမိဘတွေ ရှိရင် ဒီPOST လေးကို ဖတ်ပေးပါ
စာနာ နားလည်ပေးပါ အသက် ၆၀ ကျော်လာတဲ့အခါလူကြီးတွေ ဦးနှောက်က စကျုံ့လာပြီလို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေက သုံးသပ်ကြတယ်.. အသက် ၆ဝကျော်မိဘတွေ ရွိလာတဲ့အခါက်မ တို့ အများကြီးနားလည်ပေးရမယ်စိတ်ရှည်ပေးရမယ်.
လိုအပ်သမျှလည်း တတ်နိုင်သလောက် ကူညီပေးရပါမယ်။အာရုံကြော အားလုံးကျုံ့လာတဲ့အခါထိန်းချုပ်ခြင်းတွေနည်းလာပြီ စကားပြစိ ပြစိ ပြောလာကြမယ်ကိုယ့် မသန်စွမ်းဘူးထင်မှာစိုးလို့အိမ်ရှိသမျှအလုပ် လိုက်လုပ်လိမ့်မယ်။
လိုအပ်သမျှလည်း တတ်နိုင်သလောက် ကူညီပေးရပါမယ်။အဲ့ခါ နောက်ကပြန်လိုက်လုပ်တဲ့ သားသမီးတွေက ငြူစူလာတဲ့အခါ မိဘေတြစိတ္က ကလေးလိုပြန်ဖြစ်လာပွီး ဝမ်းနည်းလာမယ်။
အထီးကျန်လာမယ် မပြောရဲမဆိုရဲ ဖြစ်လာကြတယ် တစ်ကယ်တော့ အဲ့ချိန်လူကြီးကိုလည်း လေးစားပြီးကလေးလို သဘောထားပေးရမှာပါလိုအပ်သမျှလည်း တတ်နိုင်သလောက် ကူညီပေးရပါမယ်။တစ္ခုခု ဝယ်ပေးတဲ့ အခါတိုင်းအဖေ တို့ အေမ တို့မှာရှိတယ်မလိုဘူးအမြဲ ငြင်းတတ်လာမယ်ဒါ ဟာ အပို မကုန်စေချင်လို့ပါ
တစ်ကယ်တော့ ကျေနပ် ဝမ်းသာနေတာ..အသက်ကြီးပြီ ဘုရားတရားပဲ လုပ်ပါလားလို့ တိုက်တွန်းလို့မရပါဘူးလိုအပ်သမျှလည်းတတ်နိုင်သလောက် ကူညီပေးရပါမယ်။
အသက်ကြီးလာလေ ကလေးစိတ်ပြန်ဖြစ်လာတာမို့အကြောင်းအရာတစ်ခုကို ကြာကြာစိတ်ဝင်စားတာမျိုးမရှိတော့ပါဘူး ကျမတို့ လူကြီးမိဘတွေကို စကားပြောပေးရမယ်။စားချင်တာဝယ်ကျွေးရမယ်သူတို့ လုပ်ချင်တဲ့ အိမ်မှုကိစ္စမသေသပ်သော်လည်းပေးလုပ်ရမှာပါ။
လိုအပ်သမျှလည်း တတ်နိုင်သလောက် ကူညီပေးရပါမယ်။အသစ်အသစ်တွေ ဝယ်ပေးသော်လည်းအဟောင်းကို မစွန့်ပဲ သိမ်းထားတတ်ကြတာလည်းအသက်ကြီးသူတွေက ကလေးလိုမို့နှမျောလာပြီး မစွန့်နိုင်ကြတာပါ အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ.
တစျခြို့ သော မိဘတွေဆိုသားသမီးက အဝေးကနေ လိုလသေေးမရှိ ပို့ပေးကွပမေယျ့သူတို့လိုခငြျတာက အဲ့ဒါမဟုတျပါဘူးလိုအပျသမြှလညျး တတျနိုငျသလောကျ ကူညီပေးရပါမယျ။
နှေးထှေးမှု အလေးထားမှုစကားပွောပေးတာမြိုး လိုခငြျကွတာပါကမြ ကတော့ မူကွိုလညျးသငျမူလတနျးပွ ဆရာမလညျးဖွစျကလေးတှနေဲ့ အနကွောလာတော ကလေးစိတ်ကို ဖတျရငျး သူတို့လေးတှေ
ပြောသမျှ တိုင်သမျှကို နားထောင်ဖြေရှင်း ပေးတတ်သူတစ်ယောက်မို့ လူကြီးမိဘတော်တော်များများစိတ်ကိုလည်းလေ့လာပြီး နားလည်ပေးရပါမယ်လိုအပ်သမျှလည်း တတ်နိုင်သလောက် ကူညီပေးရပါမယ်။Credit..
Previous Article မသိတတ္တဲ့ မိဘတခ်ိဳ႕ရဲ႕သားသမီးေတြ ဘဝက တကယ္ကိုစိတ္မေကာင္းစရာပါ
Next Article ေအာင္လအန္ဆန္း နဲ႔ ဘစ္ဒတ္ခ်္တို႔ရဲ့ ပြဲပ်က္ရင္ သူအစားဝင္ထိုးမယ္ဆိုတဲ့ အိုကာမီ